स्कम्स इच्छामा अकानेको हेरफेर भूमिकाको अन्वेषण गर्दै - क्र्याडल दृश्य
Akane Scums इच्छा
by Dima 30th सेप्टेम्बर 2021 12th जनवरी 2022
एक टिप्पणी छोड स्कम्स इच्छामा Akane को हेरफेर भूमिका को अन्वेषण मा
Akane Anime Scums Wish मा एक धेरै भयावह र हेरफेर चरित्र हो। हामी यो पहिलो एपिसोडहरूमा देख्छौं जब उनको परिचय हुन्छ। त्यसोभए किन उनको प्रकृति शोको ठूलो भाग हो र यो कथाको सामान्य कथाको लागि किन महत्त्वपूर्ण छ? यस पोष्टमा, हामी त्यसको बारेमा मात्र छलफल गर्नेछौं। त्यसैले आराम गर्नुहोस् जब हामी अकाने मिनिगावाका डरलाग्दो पक्षहरू र विशेषताहरू र उनीहरूले कथामा कसरी महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले भन्ने बारे गहिरो रूपमा हेर्छौं।
Akane को परिचय
Akane Minigawa सुन्दर छ?
अकानेलाई परिचय गराउने तरिकाले उनलाई अन्य पात्रहरूबाट मुगी र निस्सन्देह हनाबी दुवै भन्दा राम्रोको रूपमा अलग राख्छ। मैले आभास पाएँ कि हानाबीले सुरुदेखि नै अकानेलाई मन नपराउने राम्रो कारण थियो र मैले पहिलो एपिसोडबाट त्यो सामान्य धारणा पाएँ।
हनाबी ईर्ष्यालु छ भन्ने होइन। यी सबै केटाहरू यी महिलाको लागि टाउको माथि टाउको झरेको देखेर उनी दिक्क छन्। एउटी महिला जसलाई उनी सजिलै देख्न सक्छिन् एक हेरफेर, धूर्त, कठोर र स्वार्थी महिला हुन्। यो साँच्चै पीडादायी भएको हुनुपर्छ जब मुगीले अन्तमा अकाने रोजे र देखाएनन्। Akane लाई यसको हरेक मिनेट मनपरेको हुनुपर्छ। Mugi उनको र उनको वरिपरि खेल्न को लागी थाहा छ।
स्कम्स विशमा अकानेलाई यसरी के बनायो?
यो धेरै कारक हुन सक्छ। उदाहरणका लागि, उनी किशोर किशोरी हुँदा उनी आफैंसँग प्रयोग गरिन् र खेल्थिन्? यसले मुगी र हानाबी दुवैप्रति उनको सहानुभूतिको कमीलाई व्याख्या गर्न सक्छ। मुगी र हानाबी झगडामा परेमा उनी किन वास्ता गर्दैनन् भनेर पनि व्याख्या गर्न सक्छ किनभने उनी एकअर्कासँग असहमत र झगडा भएको हेर्न मन पराउँछन्।
अर्को कारण शक्ति संग संलग्न हुन सक्छ। अकानेले आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा अगाडि बढाउन आफ्नो वरपरका अन्य व्यक्तिहरूलाई प्रयोग गर्न मन पराउँछिन् र आफूले चाहेको कुरा प्राप्त गरेसम्म यस प्रक्रियामा कसलाई चोट पुग्छ भन्ने कुराको परवाह गर्दैन। जस्तै जब उनले हनाबीले कसलाई माया गर्छिन् भनेर थाहा पाउँछिन्।
उनले हनाबीको अगाडि यो तथ्यलाई देखाउँछिन्, उनलाई जिस्काउँछिन्। त्यसोभए यसले के देखाउँछ? यसले देखाउँछ कि उनी अन्य व्यक्तिहरूप्रति थोरै समानुभूति राख्छिन् र अरू मानिसहरूलाई दुखित र दुःखी देखेर आनन्द लिन्छिन्। हनाबी जस्तै।
विचार गर्ने एउटा अन्तिम पक्ष अकानको बाल्यकाल हुनेछ। उनको बाल्यकाल हराइरहेको एउटा पक्ष हुन सक्छ। उदाहरण को लागी उनको बुबा वा उनको आमा गए हुन सक्छ।
कुनै एकले उनी कसरी हुर्किन्छिन् भन्नेमा धेरै ठूलो प्रभाव पार्छ। यसले उनलाई कसरी अनुशासित गरिएको छ र नैतिकताको उनको सामान्य धारणालाई पनि असर गर्छ।
यी सबै कुरा तपाईलाई तपाईको आमाबुवा मार्फत पठाइन्छ। यद्यपि हामी अकानको विगतको बारेमा धेरै कुरा गर्दैनौं। यदि मङ्गा वा एनिमको कुनै पनि भविष्यको निरन्तरता उत्पन्न हुन्छ भने, आशा छ कि हामीले हेर्न पाउनेछौं। यद्यपि, अहिलेको लागि, हामीले पर्खन र हेर्नुपर्नेछ।
के अकानेले स्कम्स विशमा रहेको आफ्नो तरिका कहिल्यै परिवर्तन गर्नेछ?
यदि तपाईंले मलाई सोध्नुभयो भने Akane परिवर्तन हुने सम्भावना धेरै कम छ। यो अनुमानमा आधारित छैन। यो तथ्यमा आधारित छ कि एनिमको पछिल्ला एपिसोडहरूको नजिक, हामीले देख्यौं कि अकानेले मुगीलाई उसलाई रोज्न र उनीसँग रात बिताउन हेरफेर गरे। सुनिश्चित गर्दै कि हनाबीले उसलाई फिर्ता जित्ने मौका पाएनन्। उनले आफ्नो जीवनमा व्यवहार गर्ने तरिकाले उनी वास्तवमा एक व्यक्तिको रूपमा को हुन् भन्ने प्रमाण हो।
Akane प्रतिबिम्बित गर्दछ
स्कम्स विश एनिमे शृङ्खलामा उनको क्यारेक्टरका कार्यहरूले स्पष्ट रूपमा देखाउँछन् कि उनी कुनै पनि समय चाँडै परिवर्तन हुने छैनन्। उसले किन त्यसो गर्ने मनसाय राख्छ? उसले आफ्नो मनमोहक र मोहक स्वभावको प्रयोग गरेर मीठो कुरा गरेर र आफूले भनेको कुरा सुन्न जो कोहीलाई मनाउन सक्छिन्।
उनी शिक्षकसँग रोमान्टिक रूपमा आफ्नो सफलताको घमण्ड गर्दै श्री कनाइलाई पनि पछ्याउन निश्चित छिन्। मलाई विश्वास लाग्दैन कि उनले आफुलाई हानाबी भन्दा राम्रो देखाउनको लागि यसो भनिन्। मलाई लाग्छ कि उनले यो कुरा हानाबीलाई पहिले नै अघिल्लो एपिसोडहरूमा गरिसकेकी भन्दा बढी क्रस गर्न भनिन्। जब हामीले श्री कानाई र अकानेलाई स्पिन-अफ मंगामा सँगै देख्छौं, यो स्पष्ट हुन्छ कि उनले आफूले चाहेको कुरा पाएकी छिन्। हनाबीलाई धेरै गाह्रो भएको हुनुपर्छ।
हनाबी र मुगी सँगै नभएको कारण अकाने हो
हानाबी र मुगी सँगै विश्वास गर्छन्
स्पष्ट औंल्याउन माफ गर्नुहोस्, तर हामी सबै एनिमी समाप्त भएपछि हनाबी र मुगी सँगै हुन चाहन्छौं। उहाँलाई थाहा पाउँदा कस्तो महसुस हुन्छ किनभने तिनीहरूको एकअर्काप्रतिको प्रेम वास्तवमा यो हुनुको अर्थमा कहिल्यै बढेन। यसरी हेर्दा धेरै दुख लाग्छ। जसरी उनले मुगीलाई प्रयोग गरे र उनीसँग यौनसम्पर्क गरे, यो थाहा पाउँदा हनाबीलाई चोट पुग्छ। उनले श्री कानाईलाई हनाबीको विरुद्धमा हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न पनि थाहा पाएको तथ्यले, उनले हनाबीको वास्तविक प्रेम रुचिको बारेमा जानकारी फैलाउने बताएकी थिइन्।
म शर्त लगाउँछु कि यदि हानाबी र मुगी वातावरणमा थिए जहाँ अकानेले उनीहरूमा यति ठूलो प्रभाव पारेको थिएन, कि कथा धेरै राम्रो र चाखलाग्दो तरिकामा जान्छ। यसको सट्टा, स्कम्स विशको अन्त्य अत्यन्त निराशाजनक र असंतोषजनक छ, दुबै मुख्य पात्रहरूले उनीहरूले चाहेको कुरा पाएनन्।
के Akane भविष्यमा Mugi र Hanabi रोक्न प्रयास गर्नेछ?
यो एउटा चाखलाग्दो प्रश्न हो जुन मैले यो लेख सुरु गर्नु अघि सोचेको थिएँ र मलाई लाग्छ कि जवाफ दिनुपर्छ। कारण यो हो कि त्यहाँ एक समय हुन सक्छ जहाँ हामीले स्कम्स विशका दुई मुख्य पात्रहरू फेरि एकजुट भएको देख्न सक्छौं। यदि कतै, हनाबी र मुगी एकअर्कासँग सम्पर्कमा आए भने, के अकानेले यसको बारेमा थाहा पाउनेछन्? र के उनले तिनीहरूलाई नयाँ सम्बन्ध सुरु गर्नबाट रोक्न प्रयास गर्नेछन्।
श्री कानाई र अकाने
मैले यसलाई हेर्ने तरिका यो हो कि अकानेले कथाको अन्त्यमा आफूले चाहेको सबै कुरा पाउँछ। Mugi र Hanabi को विपरीत, Akane को लागी यो सुखद अन्त्य हो। के उसले साँच्चै दुईवटा खुशीको खोजीमा ध्यान दिनेछ? वा उसले दम्पतीको खुशीलाई ईर्ष्या गर्छ? अकानेले हनाबीलाई धेरै क्षेत्रमा हराउँछ। तर, उसले गर्ने एउटा युवा हो । अकाने एनिमेमा मध्यदेखि ३० को दशकको वरिपरि रहेको मानिन्छ, जबकि हानाबी १५-१७ वर्षको हुन्छ।
स्कम्स विशबाट अकाने र हनाबी
के अकाने दम्पतीको युवावस्थाको ईर्ष्या गर्न सक्छ र तिनीहरूसँग के छ त्यो युवा प्रेम र केहि बढी प्रयोगात्मक र निर्दोष हो? अकानेले श्री कानाईसँगको आफ्नै साझा सम्बन्धबाट प्राप्त गर्न नसक्ने कुरा। म भन्न चाहन्न कि यो धेरै टाढाको कुरा हो। स–साना कुरामा मानिसलाई ईर्ष्या हुन्छ । के यो साँच्चै यो सुझाव गर्न को लागी यस्तो खिंचाव हो?
अकाने हनाबीलाई अभिवादन गर्छिन्
मलाई लाग्छ अकानेले प्रस्तावमा रहेको सबै भन्दा राम्रो चीज चाहन्छ। सबैको पछि लाग्ने कुरा। उनले मुगी लिन्छिन् र त्यसपछि स्पिन-अफ मंगा मिस्टर कानाईमा। हनाबीबाट मुगीलाई फेरि चोर्नको लागि कनाईमा उनको धोका मैले कल्पना पनि गर्न सक्छु, तर त्यो चरित्रको अलि बाहिर छ, उनी जस्तो व्यक्तिको लागि पनि, जसको क्रूरताको कुनै सीमा छैन।
मुगी र हनाबी कनाई र अकाने सँगै हेर्छन्
मलाई अकाने र उनको लेख्ने तरिका मन पर्छ। उनले श्रृंखलाको लागि एक धेरै राम्रो विरोधी बनाउँछिन् र मलाई हनाबी र मुगी बीचको द्वन्द्व ल्याउने बानी बसेको तरिका मन पर्यो। थप्नको लागि अर्को कुरा हो कि उनले यो कत्ति सजिलै गर्छिन्। उसले यसलाई सजिलो बनाउँछ! स्कम्स विशमा के समस्या छ भन्ने कुरा स्पष्ट छ, र त्यो अकाने हो। निस्सन्देह। यदि त्यहाँ एक सीजन2थियो भने, उनले सम्भवतः आफूले राम्रो गर्ने काममा आफ्नो भूमिका खेल्ने थियो। यदि हामीले उनलाई देख्यौं भने अहिले थाहा छैन तर तपाईले हाम्रो लेख स्कम्स इच्छाको सीजन २ मा जाँच गर्न सक्नुहुन्छ।
अघिल्लो प्रविष्टि भाडा-ए-गर्लफ्रेन्ड सिजन २ प्रिमियर मिति + अन्त्यको व्याख्या गरियो
अर्को प्रविष्टि Komi रिलीज मिति संचार गर्न सक्दैन, कहाँ हेर्न + थप